Akụkọ Bible: Chineke Elee Okwukwe Ebreham Ule - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Arabic Armenian Armenian (West) Assamese Ateso Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bicol Bislama British Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cinyanja Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Czech Czech Sign Language Dangme Danish Drehu Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Estonian Sign Language Ewe Faroese Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language French French Sign Language Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Hungarian Sign Language Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Japanese Sign Language Jula Kabardin-Cherkess Kabiye Kabyle Kachin Kannada Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lamba Laotian Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Low German Luganda Lugbara Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mende Mexican Sign Language Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Nicaraguan Sign Language Niuean Norwegian Nuer Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Romanian Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshwa Tsonga Turkish Turkmen (Cyrillic) Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Ukrainian Umbundu Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Wolof Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Ị̀ NA-AHỤ ihe Ebreham na-eme n’ebe a? O ji mma, o yikwara ka ọ gaje igbu nwa ya. Gịnị mere ọ ga-eji mee ihe dị otú a? Ka anyị burugodị ụzọ lee otú ya na Sera si mụta nwa ha.
Cheta na Chineke kwere ha nkwa na ha ga-amụta nwa. Ma nke ahụ yiri ihe na-apụghị ime eme, n’ihi na Ebreham na Sera emewo nnọọ agadi. Ma, Ebreham kwere na Chineke pụrụ ime ihe yiri ihe na-apụghị ime eme. Gịnịzi mere?
Mgbe Chineke kwesịrị nkwa ya, otu afọ gabigara. Ka e mesịrị, mgbe Ebreham gbara otu narị afọ, Sera agbaakwa afọ iri itoolu, ha mụrụ nwa nwoke, bụ́ Aịzik. Chineke mezuru nkwa ya!
Ma mgbe Aịzik tolitere, Jehova lere okwukwe Ebreham ule. Ọ kpọrọ ya: ‘Ebreham!’ Ebreham azaa ya, sị: ‘Lee m!’ Chineke wee sị ya: ‘Kpọrọ nwa gị, naanị otu nwa i nwere, bụ́ Aịzik, jee n’ugwu nke m ga-egosi gị. Gbuo nwa gị n’ebe ahụ ma were ya chụọ àjà.’
Okwu ndị a wutere Ebreham nke ukwuu n’ihi na ọ hụrụ nwa ya n’anya hie nne. Ma cheta na Chineke ekwewo nkwa na ụmụ Ebreham ga-ebi n’ala Kenan. Olee otú nke a ga-esi mee ma ọ bụrụ na Aịzik anwụọ? Ebreham aghọtaghị nke a, ma o gere Chineke ntị.
Mgbe Ebreham ruru n’ugwu ahụ, o kere Aịzik agbụ wee nyiwe ya n’elu ebe ịchụàjà nke o wuru. O wee mịpụta mma igbu nwa ya. Ma n’otu mgbe ahụ, mmụọ ozi Chineke kpọrọ ya: ‘Ebreham, Ebreham!’ Ebreham wee zaa ya: ‘Lee m!’
Chineke wee sị ya: ‘Emerụla nwata ahụ ahụ́ ma ọ bụ mee ya ihe ọ bụla. Ugbu a ka M matara na i kwere na m, n’ihi na ị jụghị iji nwa gị, bụ́ otu nwa i nwere, chụọrọ m àjà.’
Lee okwukwe siri ike Ebreham nwere n’ebe Chineke nọ! O kwere na ọ dịghị ihe Jehova na-apụghị ime, na ọbụna Ọ pụrụ ịkpọlite Aịzik n’ọnwụ. N’ezie, ọ bụghị uche Chineke ka Ebreham gbuo Aịzik. Chineke mere ka alụghụlụ ọhịa jide otu ebulu, o wee gwa Ebreham ka o jiri ya chụọ àjà kama iji nwa ya.
Jenesis 21:1-7; 22:1-18.
Olee nkwa Chineke kwere Ebreham, oleekwa otú Chineke si mezuo nkwa ya?
Dị ka e gosiri na foto a, olee otú Chineke si lee okwukwe Ebreham ule?
Gịnị ka Ebreham mere n’agbanyeghị na ọ ghọtaghị ihe mere Chineke ji nye ya iwu o nyere ya?
Gịnị mere mgbe Ebreham wepụtara mma iji gbuo nwa ya?
Olee otú okwukwe Ebreham nwere n’ebe Chineke nọ siruru n’ike?
Gịnị ka Chineke nyere Ebreham ka o jiri chụọ àjà, oleekwa otú Chineke si mee nke ahụ?
Gụọ Jenesis 21:1-7.
N’ihi gịnị ka Ebreham ji bie nwa ya úgwù n’ụbọchị nke asatọ? (Jen. 17:10-12; 21:4)
Gụọ Jenesis 22:1-18.
Olee otú Aịzik si gosi na ya na-edo onwe ya n’okpuru nna ya, bụ́ Ebreham, oleekwa otú nke a si see onyinyo ihe ka ukwuu nke na-aga ime n’ọdịnihu? (Jen. 22:7-9; 1 Kọr. 5:7; Fil. 2:8, 9)